BannerBlackList waxay joojineysaa ogeysiisyada ku saabsan barnaamijyada aan rabno | Wararka IPhone
Maaddaama Apple ay beddeshay habka ogeysiisyada lagu muujiyo qalabkeenna, iyadoo ka socota digniin bartanka shaashadda, xoog leh oo aan awood dambe lahayn, digniinta xagga sare ku taal, Nooc kasta oo cusub oo Apple ay soo saartay ee iOS wuxuu ku darayay hagaajinta isdhexgalka iyo sidoo kale qaabeynta isla. Nasiib wanaagse, waan joojin karnaa ogeysiisyada codsiyada, gaar ahaan kuwa aan na siinin macluumaad aan u baahan nahay inaan isla markiiba ogaanno, sida kuwa caadiga ah ee ciyaaraha ama codsiyada. Ogeysiisyada waa hagaagsan yihiin, laakiin markaan ciyaareyno, ku raaxeysaneyno fiidiyoow ama aan ku shaqeyneyno wax hawl ah dalab, way dhibi karaan. Tani waa meesha BannerBlacklist tweak uu ciyaaro.
BannerBlacklist waa isbedel taas waxay noo ogolaaneysaa inaan xannibo ogeysiisyada markaan adeegsaneyno barnaamijyada qaarkood, ma wada aha. Xulashada qaabeynta qaabdhismeedkan, marka lagu daro dhaqaajinta ama ka shaqeynta tweak dhaqsaha ah, waxaan ku dari karnaa codsiyada aynaan dooneynin inaan ka helno nooc kasta oo ogeysiis ah qeybta Blacklist. Sidan oo kale, markaan ku ogaanno taas barnaamijyada ama ciyaaraha aan qaabeynay, kama heli doonno wax ogeysiis ah nidaamka.
Laakiin sidoo kale waan sameyn karnaa barnaamijyada heli doona ogeysiisyada marka aan isticmaaleyno, si aan isugu dari karno isticmaalka codsiyada qaarkood iyo kuwa kale. Sidan oo kale, haddii aan isticmaaleyno Safari, oo ku dhex jirta Blacklist, Waxaan ku dari karnaa WhatsApp liiska madow si markaa kaliya loo helo ogeysiisyada arjigan.
Maskaxda ku hay in isbeddelkaani uu joojinayo oo keliya ogeysiisyada markay codsiyada la xushay furan yihiin, taasi waa, haddii aan ku jirno shaashadda guriga ama isku xirnaanta iPhone-keena, ogeysiisyada ayaa la heli doonaa iyada oo aan dhibaato jirin. BannerBlacklist ayaa loo heli karaa si loogu soo dejiyo repo BigBoss http://skylerk99.github.io gebi ahaanba bilaash ah oo la jaan qaada dhammaan noocyada macruufka 9.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » BannerBlackList waxay joojineysaa ogeysiisyada ku jira barnaamijyada aan rabno
Repo taas oo ay timaaddo ayaan raadinayaa oo raadinayaa oo waxba